Yemahara Xbox Live Makodhi (2020 Akavimbiswa) - Hapana jenareta & Ongororo - Kutamba
Ungawana Sei Mahara Xbox Live Makodhi?
Mazuva ano, nekuwedzera kwekudiwa kwemitambo, vanhu vari kufamba zvakanyanya vachienda kumitambo inowanikwa nedhijitari kwete yemadhisiki epanyama. Imwe yemabhenefiti akanakisa ekutenga mitambo yedhijitari ndeyekuti vanochera dhata vanokwanisa kutsemura makodhi anovhura mitambo muchitoro mahara.
Mazhinji mawebhusaiti anoti ivo vanokwanisa kuburitsa pachena emahara macode eXbox. Saka, mune ino posvo, tichave tichienda kuburikidza neizvi zvirevo uye nekuwana chokwadi nezve Yemahara Xbox Live Makodhi jenareta.
Iko Yemahara Xbox Live Makodhi jenareta anoshanda chaizvo?
Vanhu vazhinji havana chokwadi nezvekushandisa Xbox kodhi jenareta asi usazvidya moyo. Muchikamu chino, tichave tichikurukura ese maficha uye nekurwisa Xbox mhenyu kodhi jenareta.
Ungawana Sei Mahara PSN Makodhi?
Tora Mahara PUBG UC - Maitiro Ekushanda
Makodhi anopiwa kungave nevanhu vanoda kuapa kana kuigadzira vachishandisa kodhi jenareta. Iyo software inoshandisa mvumo uye musanganiswa kuburitsa kodhi inozotaridzika kunge yechokwadi, asi inogona kana isingashande. Zvakafanana nekutamba rombo rakanaka paunogona kana kusatambira mubairo. Pane zvakawanda zvakaderera zvaungade kufunga usati washandisa kodhi jenareta.
Nguva inopedza:Makodhi emigodhi akaisa nguva yemakodhi aya anogona kutaridzika kunge echokwadi asi akazove enhema. Iwe uchafanirwa kutora mukuedza kwekupinza ese makodhi ayo saiti inogadzira kusvikira imwe yacho ikushandire iwe.
Kurambidzwa:Akaundi yako inogona kumiswa nekuda kwekuita izvi zviitiko zvepamutemo sezvo zvisiri pamutemo kubvarura makodhi kana kuwana 'yemahara' mitambo. Heino skrini kubva kuXbox Live iyo inotsigira kwedu kudana.
Kutambisa nguva:Iko hakuna vimbiso yemakodhi akagadzirwa nekuti nekutsvaga kumwe chete pagoogle unowana zviuru zvemasayiti anoti anokupa emahara macode asi unozopedzisira waapinda uye uchizviwana usipo asi uchitambisa nguva yako yaungadai wakashandisa zadzisa iwo mwero mumutambo.
Zvakavanzika Zvinotyisidzira:Mazhinji mawebhusaiti anokumbira iwe kusaina uchishandisa yako email kero uyezve uine yako yakavanzika ruzivo, zvirinani kusaina kusaina kana kushandisa dummy email kero yemasaiti akadai aya. Iwe unogona kunyange kushandisa yakanaka yekuwedzera kusefa kunze aya marudzi ezvikumbiro zvekusatendeseka.
Muchikamu chinotevera cheichi posvo, isu tichaenda kuburikidza nenzira dzaungagone kuwana makodhi ari zviri pamutemo uye akavimbika.
Yemahara Xbox Live Makodhi - Iyo nzira yepamutemo
Ngatisvikei kune iyo iyo iyo yamanga makamirira kuti mowana sei mahara macode?
Iwe unogona kutora chikamu mukupa kunoitwa neYouTubers, saiyo ThatDudeSly, Reck Alice, uye zvimwe zvakawanda. Kunyangwe urwu rudzi rwe rombo rakanaka, asi iwe une mukana uri nani wekuhwina pano pane kugara ipapo uye kuyedza makodhi emahara kubva kune zvisiri pamutemo webhusaiti.
2. Kutengesa pazvitoro
Mazuva ano mitambo yakawanda inova yemahara mune imwe mwedzi, seFortite, ngano dzeApex, Kufona kweDuty Warzone, nezvimwewo, zvakadaro, mitambo inodhura mari inoitwawo mahara nevagadziri kwenguva pfupi. Nekudaro, iwe unofanirwa kucherechedza kana iko kutengesa kwatanga.
Kune akawanda masreddits ayo anopa makodhi emahara. Iwe unogona kujoina navo uye uvashandise kuchido chako. Mubhokisi rekutsvaga reReddit tsvaga 'r / freexboxcodes' uye iwe unofanirwa kuwana mhedzisiro, imomo mamoderita achakubatsira iwe kubuda.
4. XBOX mutambo kupfuura
Pane chikonzero nei tataura nezve iyi sarudzo mune yekupedzisira. Haisi tekinoroji yemahara, asi iri chokwadi sarudzo yekufunga, Microsoft sekambani inokupa matatu mamodheru ekunyorera maunogona kusarudza-kupasa mutambo kana mutambo kupasa kwekupedzisira, zvinoenderana nezvaunoda iwe kusarudza imwe chete.
Iyo Game Pass Yekupedzisira inotanga pa $ 14.99 / mwedzi uye Game Pass pa $ 9.99 / mwedzi iwe unowana mazana emitambo yemahara; saka unogona kuwana mari yako mukutsiva yemitambo yakawanda.
Ivo zvakare vachakupa yemahara beta kuwana kune yavo gore yemitambo chikuva. Iwe zvakare unowana akakosha marapisiro pamazita eAAA. Nokusingaperi, iwe unowana mitambo senge Tom Clancy's Rainbow Six Kutyisidzirwa, Red Dead Kununurwa 2, Doom Eternal, Forza Motorsport 7.
Matanho ekuisa iyo kodhi muXbox live Chitoro:
Kunge yetsika yedhijitari kodhi, iwe unozopinda iyo kodhi mune Xbox rarama chitoro; zvisinei, pakuzorodza, nhanho idzi dzinotevera:
Pinda neakaundi yeMicrosoft.
Enda kune yepamutemo Microsoft Chitoro.
Wobva wasarudza sarudzo yekushandisa kodhi.
Pinda iyo 25-hunhu kodhi mune inodiwa nzvimbo uye rova ​​pinda.
Tarira: Nekudaro, kana iwe ukasarudza kushandisa kodhi jenareta, saka nhanho yekutanga ichave yekugadzira macode pane webhusaiti kodhi webhusaiti.
Kupedzisa, mukana weiyo kodhi jenareta unoshanda uri mushoma. Nekudaro iwe unofanirwa kusarudza nzira dzinovimbisa iwe mahara emitambo, izvo zvingave kungave nekutora chikamu mukupa kana kutenga iyo Xbox mutambo kupfuura, iyo mumaonero edu, uye iri yakanyanya kunaka sarudzo kwauri
Isu tinovimba kuti posvo iyi yapindura mubvunzo wako, uye tinovimba iwe wawana mhinduro zvakare. Kana iwe uine chero zano kana nzira dzaungagone kuwana mahara Xbox mhenyu kodhi, wozoigovana nesu mubhokisi remashoko pazasi.
Ungawana Sei Mahara Robux?
NordVPN Netflix - Zvino Tarisa Kunze USA
Nintendo Chinja 2 - Kuburitswa Zuva, Specs & Kubuda
Tom Sturridge Mafirimu & TV inoratidza - Unofanira Kutarisa
Akanakisa Anime Ekuparadzira Sites 2020
Maitiro Ekutarisa Prime Vhidhiyo paTV?
50 Mafirimu Akanakisa Ekutarisa PaNetflix
ExpressVPN Yemahara Muedzo 2020 - Mazuva makumi matatu Mari Kudzoka (Yakasimbiswa)
Netflix vs Amazon Prime Vhidhiyo - Yekupedzisira Kuenzanisa
Disney Plus Bundle (2020) - Tora Disney +, Hulu & ESPN +
iPhone 12 Pro Max Muenzaniso Nhamba A2342, A2410, A2411, A2412 Mhando
Nzira yekugadzirisa Hulu Isingashande Nyaya?
AliExpress Legit? Yakadzama Ongororo
sei mahara emahara robux chaiyo 2016
webhusaiti iyo inokutendera iwe kuona emahara mafirimu
amazon yemahara echipo kadhi kadhi
putlocker mukati megungwa
maitiro ekupinda roblox promo kodhi